Mpanao Gazety Tsy Misy Sisintany: Ahoana No Hiarovany ny Bilaogera Ary Ahoana No Hahafanahao Manampy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Mey 2018 16:17 GMT
Tamin'ny volana lasa teo, namoaka ny pejiny Ampio Ireto Bilaogera Ireto ny Global Voices, izay mampahafantatra ny fidiran'ilay fikambanana amin'ny fisoloana vava an'ny bilaogera . Na ao anatin'ny asan'ny Global Voices hatrany aza, lasa nihamafy ny fanohanana ireo bilaogera voagadra tato anatin'ny enimbolana farany teo noho ny fisamborana ireo bilaogera roa namana akaiky ny vondrom-piarahamonin'ny Global Voices. Ny mpamoaka lahatsoratry ny Global Voices ao Azia Atsinanana, Hao Wu, no nogadraina tsy nisy fiampangana tao Shina tamin'ny Febroary. Mbola tsy nahazo alalana hifankahitana amin'ny fianakaviany na aminà mpisolovava izy. I Alaa Abd el Fatah, niara namorona ny bilaogy Ejiptianina Alaa and Manal's Bit Bucket, no bilaogera faharoa voasambotra. Soa ihany, nifarana soa aman-tsara ny tantaran'izy ity. Nambara tamin'ity herinandro ity ny famotsorana an'i Alaa, rehefa avy niaina herinandro enina tany am-ponja, tafaverina an-trano taorian'ilay alina ratsy tao amin'ny efitrano kely fitazonan'ny polisy.
Kanefa, na nitombo aza ny fiantraikan'ireo bilaogera politika, mitombo ihany koa ny fanenjehana ataon'ny governemanta iaretan-dry zareo, governemanta izay maniry ny hampangiana ireo feon'ny fanakianana rehetra. Raha ny tena izy, bilaogera ny 50% -n'ny olona voasambotra noho ny filazana natao teny anaty aterineto. Mba hahafantatra misimisy kokoa ny mombamomba an'ity seho ity no nitsidihako ny biraon'ny Mpanao Gazety Tsy Misy Sisintany (Reporters Sans Frontières), vondrona mipetraka ao Paris natao hiaro ny fahalalan'ny gazety manerantany. Tany aho mba hiresaka tamin'i Julien Pain, filohan'ny Biraon'ny Fahalalahan'ny Aterineto ao amin'ny RSF. Liana tamin'ny fomba ampiasain'i Julien sy ny mpiaramiasa aminy mba hiarovana ireo bilaogera aho.
Tamin'ny 1985, natsangan'ny mpanao gazety Frantsay efatra izay naniry ny hiaro ny mpanao gazety voagadra ary hiaro ny fahalalahan'ny gazety manerantany ny RSF. Fitomboana natoraly avy amin'io tanjona io ny Biraon'ny Fahalalahan'ny Aterineto. Natsangana tamin'ny 2001 ho fanehoankevitra mivantana tamin'ilay famoretana hita natao tamin'ny mpanao gazety taorian'ny 11 Septambra ilay izy. Nanazava i Julien, “Nampiasain'ny governemanta ny ady amin'ny fampihorohoroana ho fiolahana mba hanarahana maso ny aterineto ary hiditra amin'ny fiainana manokan'ny olona. Io no mampitaintaina anay.” Nifototra voalohany indrindra amin'ny fiarovana ny fiainana manokana eo amin'ny aterineto ny Biraon'ny Fahalalahan'ny Aterineto. Kanefa, tamin'ny nandraisan'i Julien ny birao tamin'ny 2003, novainy ny fifantohana ho any amin'ny fisoloana vava ny ankamaroan'ireo olona izay voagadra na enjehina vokatr'izay soratany tao amin'ny aterineto.
Tsy ny bilaogera no nokendrena tamin'ny voalohany. Ireo “mpanohitra eo amin'ny aterineto” no olona izay matetika lasibatry ny governemanta tsy refesi-mandidy, “mpanohitra politika mahazatra ” izay “nandeha teo amin'ny aterineto” ary nanomboka namoaka resaka manakiana eo amin'ny aterineto. Tsy manoratra anaty bilaogy izareo, fa eo amin'ny tranonkala mahazatra tahaky ny Boxun.com, tranonkala mipetraka ao Etazonia misolo vava ho an'ny zon'olombelona ao Shina. Na tamin'ny Septambra 2005 aza, tamin'ny nivoahan'ny Boky kely ho an'ny Bilaogera sy Mpanohitra eo amin'ny Aterineto, ireo mpanohitra eo amin'ny aterineto fa tsy ny bilaogera no tena nenjehin'ireo governemanta tsy refesi-mandidy. Araka ny nambaran'i Julien, izany dia satria mbola nianatra namindra ny fanaovana bilaogy pôlitika manerantany ary tsy dia nametraka olana loatra ireo bilaogera. 7% -n'ireo olona voasambotra noho ny filazana nataony tety amin'ny aterineto fotsiny ireo bilaogera, raha 50% izy izao.
Ho an'ny hoavy, mihevitra i Julien fa ho lasa mampidi-doza kokoa ny toedrahraha iainan'ny bilaogera. Mihamitombo ny isan'ireo fahavalon'ny aterineto. Hoy izy nitantara: “Nisy fotoana, tsy niezaka ny hifehy ny tontolon'ny aterineto ireo governemanta, tahaky ny ao Afrika Atsimoin'i Sahara. Tsy marina intsony izany. Tonga saina ireo governemanta manerantany hoe ilain-dry zareo ny mametraka ny tànany eo amin'ny aterineto”. Tsy milaza zavatra tsara ho an'ireo olona mibilaogy io fahatsiarovantena vaovao avy amin'ny governemanta tsy refesi-mandidy io momba ny herin'ny resaka eo amin'ny aterineto.
Araka izany, fomba ahoana no iarovan'ny Biraon'ny Fahalalahan'ny Aterineto ireo bilaogera? Isaky ny maraina, jeren'i Julien izay toerana misy bilaogy voasakana na bilaogera voasambotra. Tsy azony avy amin'ny haino aman-jery mahazatra anefa izany, fa avy amin'ny tranonkala iray misy mpiasa 120 izay asaina mijery akaiky ny aterineto ao amin'ny fireneny tsirairay ary manao tatitra momba ireo tranonkala voasakana ireo. Vantany vao voaporofo ny fisianà tranonkala voasakana, manoratra lahatsoratra an-gazety iray mitantara ny zava-misy no asan'i Julien manaraka. Alefa ireny fanambaràna an-gazety ireny ho any amin'ireo mpikamban'ny haino aman-jery mahazatra (televiziona, onjam-peo, gazety) izay manana fifandraizana amin'ny RSF sy mampiasa an'ilay fanambaràna an-gazety ho fototra hanoratana tantara iray halefa amin'ny vaovao. Tantara avy ao amin'ny gazety mahazatra no mitondra fanairana bebe kokoa momba ny zavatra iainan'ilay bilaogera. Miampy an'izay, ny Biraon'ny Fahalalahan'ny Aterineto manao fandresena lahatra amin'ny anaran'ny bilaogera sy ho an'ny fahalalahan'ny aterineto amin'ny ankapobeny. Ilayfandresena lahatra dia mety afaka haka endrika fifandraisana amin'ny Masoivoho vahiny, fangatahana amin'ny manampahefana avy ao amin'ny Vondrona Eoropeanina mba hanery ny governemantanà firenena iray mba hamotsotra bilaogera iray, na koa miezaka ny hanova ny lalànan'ny aterineto. Ary farany; manome vola ny fianakavian'ireo bilaogera voasambotra ny RSF mba hahafahan'izy ireo mivelona ara-bola na dia migadra aza ny mpamelona ny ankohonana.
Afaka manampy ny Biraon'ny Fahalalahan'ny Aterineto ianao mba hiaro ireo bilaogera. Raha hitanao fa misy bilaogy voasakana na bilaogera voasambotra, mandefasa imailaka amin'i Julien amin'ny internet@rsf.org . Raha tranganà bilaogy voasakana, afaka mandeha lavitra kokoa aza ianao ary manampy ny RSF mba hanamarina ilay tantara. Tsy dia azo antoka loatra hoe hanaiky ny governemanta fa nanakatona tranonkala, araka izany, tsy afaka porofoina velively amin'ny fomba ofisialy hoe nisy ilay fisakanana. Noho izany, ilaina ny mandrakitra porofo avy amin'ny loharano maromaro ho fandraisana anjara amin'ny tantara. Voalohany, asaina miezaka miditra amin'ilay tranonkala avy amin'ny ISP (Mpanome tolotra aterineto) hafa ireo olona miaina ao anatin'ilay firenena. Raha tsy afaka miditra amin'ilay tranonkala izy ireo avy amin'ny ISP samihafa, mipetraka ny hevitra fa misy olana ara-teknika amin'ny iray amin'ireo ISP ary manondro fa voasakana avy any anatiny ny tranonkala. Faharoa, miezaha ny hifandray amin'ny tompon'ny tranonkala. Mety manavao ny tompony na nakatony mandritra ny fotoana fohy ny tranonkalany ho an'ny antony samihafa. Raha mino ny tompony fa voasakana ny tranonkalany, dia izay no manamafy ny hevitra fa nisy tokoa ny fibahanana. Mety ho fanampiana be ho an'ny fahalalahan'ny fanehoana hevitra eo amin'ny aterineto ny tambajotra manerantanin'ny Global Voices ahitàna ireo bilaogera sy ireo mpamaky bilaogy, amin'ny fanaovana azy ireo ho maso sy sofin'ireo fikambanana tahaky ny RSF
21 Mey 2018, 22:12
Manantena isika fa mbola misy izany…
24 Mey 2018, 10:11